Izicatshulwa malunga noMhombiso omnyama-abaYili kuMbala oMnyama - Ukuphefumlelwa Kombala
Izicatshulwa malunga noMhombiso omnyama-abaYili kuMbala oMnyama
Ukongeza ubukhazikhazi- okanye iigravitas- kulo naliphi na igumbi, umda omnyama yiyo yonke into oyifunayo. Abaqulunqi babelana ngesizathu sokuba bathande ukusebenzisa umbala omnyama ekuhombiseni kwasekhaya.
1. Yongeza Ubunzima
Kwigumbi lokuhlala eline-cream yonke, songeze izinto ezintathu ezimnyama: itafile ephezulu ye-Tom Dixon enesiseko esimnyama, iipilo ezinomqolo omnyama, kunye nehashe elimnyama elilingana nobomi. Ochukumisayo unike indawo ubunzima. ' - UGhisliane Viñas
'Intonga emnyama yokutshixa kukuchukumisa okudala kusebenza nakweliphi na igumbi. Umgca oqinileyo othe tye wongeza ivolumu nokuphakama kwiifestile, kunye nokuchukumisa ubudoda kunye nomdlalo kwindawo. ' - UJeff Andrews
3. Amabala Isithuba
'Igumbi lokuqala endakhe ndalihombisa, lomntu wam oneminyaka eli-10 ubudala, lalinodonga olumnyama lwe-patent-yesikhumba-kakuhle, i-super vinyl, eneneni-kunye nombala omhlophe omenyezelayo. Kule mihla, umnyama unceda ukugcina izikimu zam ezinemibala emibalabala ekubeni 'yiLollipop elungileyo yenqanawa.' Ubugcisa yindlela entle yokufumana mnyama egumbini. Ndithenge nje inani lepeyinti ezimnyama-mnyama kubathengi beArt Basel. Kwaye ndisayithanda ipatent emnyama! ' - UJamie Drake
Umgca omncinci wegranite emnyama ngokupheleleyo eseludongeni unje nge-eyeliner efanelekileyo. - ULauren Rottet
inkuthazo yoomama ngosuku ucaphula
5. Yongeza isitayela
'Iingcango ezimnyama ezinamabala amnyama ziyimbonakalo ye-chic.' - URon Woodson
6. Ukulinganisa iiHues Light
'Ndiyazithanda iimoto ezimnyama, iilokhwe ezimnyama, neeperile ezimnyama, kodwa ndihlala ndisebenzisa umbala ngobunono ngaphakathi, kuba inokuba nzima. Kakhulu, ndiyisebenzisa ukulinganisa ukugqitywa kokugqitywa. Umzekelo, imiphezulu yeetafile zemabhile ezimnyama ezimnyama ezinokubonelelwa zinokunika ikhitshi elinombala ocacileyo ngombala we-chic yoshishino. ' - USandra Espinet
7. Yenza ukuKhangela okuDlamkileyo
Kuyamangalisa. Ngoku ndenza indlu enebala elimnyama nelimhlophe - iindonga ezimnyama ziyehla kwaye ziyanyibilika kwaye zenza umbono wokuba iindonga ezimhlophe ziyadada. ' - UDavid Mann
8. Izakhelo zeSithuba
'Xa unegumbi elijonge indawo entle yomhlaba, peyinta iifestile ezimnyama. Okumangalisa kukuba, oku kwenza ukuba iimullion ziphinde zibuyele ngasemva kwaye zingenise ngaphandle. - Umntu weKara
9. Wenza iGumbi eliDala nelikaMhlanje
'Abanye abamnyama kwindawo yemveli banokungenisa umbono omncinci, onamhlanje. Kutshanje ndiye ndathatha isitulo esihonjisiweyo sikaLouis XVI ndasiphakamisa kulusu lomnyama lwehashe, into eyothusayo kwinto yesihlalo esiqhelekileyo. ' - UBrian Gluckstein
uhlala kwindlu yomthi
ipeyinti emhlophe yeendonga
imifanekiso yeendonga zokuhlala
inyanga epinki ngo-2017